Central Maine Hilibka - Central Maine Meats
Xalaal dheer waa cunto dhaqmayso sharciga Islaamka, sida lagu qeexay Quraanka. Shuruudaha for xalaal ah loo isticmaalo by Central Maine Hilibka waa sida soo socota:
Qaabka xoolaha u kawaanka iyo dejinta waa in ay ahaataa dadnimo.
Xoolaha waa in uu ahaadaa mid ah noocyada xalaal baa in baabbi’in in sharciga Islaamka. (Hilibka lo’da, weylaha, iyo wan yar, ariga) Oo nool oo caafimaad qaba waqtiga la qalayo.
Gowracidda waa in la sameeyaa by Muslim ah (oo dhimirkiisu dhan yahay, waa baaluq, oo si buuxda u fahamsan nidaamka Islaamiga ah iyo xaaladaha gawraca xoolaha).
Qalabka gawraca iyo qalab kale waa in ay ahaadaan la qalayo xoolaha xalaal ah oo keliya loo isticmaalaa.
Mindi waa in uu muddo dheer ku filan, mandiil afaysan oo aan iin iyo dhaawac, xayawaanka ‘ s halbowlayaasha artery, xididdada Annagaana ugsa dhaw, dhuunta iyo hunguriga waa in loo soocay. Laf dhabarta waa in aan la gooyaa oo madaxa waa in aan si buuxda u jareen, si ay u abaari haemorrhage deg deg ah oo weyn.
Magaca Eebana waa kii la sheegay in waqti la qalayo by isagoo leh: ” Bismillah Allahu Akbar ” ( In Magaca Eebe, Eebana waa weyn ee).
Xayawaanka The gowracay wajihi doonaan Qiblada ah (jihada tukashada Muslimiinta) halka gawraca xayawaanka.
Gawraca waa in la sameeyaa hal mar oo keliya; gawraca hirgeliyo waa in aan loo qaado xoolaha inta lagu jiro gawraca, qaaditaanka kasta waxaa yimid abaabul sidii nin keliya la qalayo, falalka kala duwan ee la gowraco on mid ka mid ah xayawaanka waxaa ka mamnuuc ah.
Xoolaha ayaa la gawrici sidan oo kale in ay si deg deg ah nolosha ka tago iyo waxa aan la tagay si ay u xanuunsataan.
Dhiig waa in ay ahaadaan lama filaan ah oo dhamaystiran; xoolaha waa in aan la katiinadeysan iyo wax tara oo ka hor dhiig la dhamaystiro.
Diyaarinta dheeraad ah iyo dhar xidhashada baqtigiisa waa in dib loo dhigo ilaa dhamaan calaamadaha nolosha iyo reflex cerebral la waayay.
Shuruudaha cajiib ah waxaa ka mid ah la laayo iyo cajiib ah shuruudaha macluumaad dheeraad ah.
Ficilka of cajiib ah si weyn lagu niyad jabin sharciga Islaamka, si kastaba ha ahaatee, go’aanka ku saabsan xayawaan oo uu soo yaabay waa in xayawaanka xalaal ahayn in baabbi’in in xayawaanka noolaa waqti la qalayo.
Shuruudaha soo socda cajiib ah The hawlgalka iyo xakamaynta hay’adaha hanqadhka waa la oofiyaa shaqsi ah u tababaran.
Kaliya hababka aan halis la aqbalo sida bool madaxa-kaliya korontada cajiib ah ama maxaabiis cajiib ah.
xoolaha waa in uu ahaadaa waqti la qalayo nool yahay iyo waa in ay awoodaan in ay dib u miyir.
The kormeere iyo gawraca waa in lala socdo xoolaha ka dib markii cajiib ah si loo xaqiijiyo in xayawaanka waa yaabayaan oo nool ka hor inta dhibic la qalayo.
Slaughterer waa in isla markiiba lagu gowraco xoolaha ka dib sheegid naaxariista oo aan dib u dhac kasta oo muhiim ah ama wax kale ee u dhexeeya samaynaya. Waqtiga la gowraco, haddii magaca qof kasta oo kale oo Eebe ka loogu yeedho (ie xoolaha ku allabaryi jireen isaga u / iyada), hilibka noqdo Haram ama ” sharci darro ah ” . Haddii Muslim ah illoobaa Caabudayseen Magaca Eebe waqtiga la gowraco, hilib ah sii joogi doonaan xalaal ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay si ula kac ah Hana Caabudin Magaca Eebe, hilibka noqdo Haram.
Xoolaha waa in lagu gowracaa by isticmaalka mindi af badan iyo in la sameeyo in mid ka mid stroke iyadoon laga qaadin mindi. mindi waa in aan dilo sabab u tahay culeyska. Haddii ay dishaa ay sabab u tahay saameynta ay hilib ma laga yaabaa in la ogolaan karo.
Slaughterer waa sooci dhan afar weelal dhuunta isticmaalaya cut siman ee hoos ku Adam ‘ tufaaxa s bilaabo hore ee cunaha, iyo geeddi-socodka, si buuxda u sooci ku dhuunta, hunguriga, xididdada Annagaana ugsa dhaw iyo artery. Hababka cut la gowraco taagan ma aha mid la aqbali karo sida ay u ma damaanad qaadi goynta, oo weelasha oo loo baahan yahay. Mindi waa in la jeermis dilay iyo si fiican maydheen ka dib markii la gowraco kasta.
Dhimashada xoolaha waa in dhici by dhiig dhamaystiran iyo madaxa neefka waa in aan la baabbi’in doonin inta lagu guda jiro gawraca ilaa xayawaanku yahay gebi ahaanba dhintay. Xataa mindida waa mool dheer oo aan galay laf-dhabarta u tagaan. Soo ridayo ama goynta qayb ka mid ah xayawaanka lama oggola hor xayawaanku yahay gebi ahaanba dhintay.
*** lagu qalo waa in aan la samayn on line a soo saarka meesha doofaarrada lagu gowraco. qalab kasta oo loo isticmaalo gawraca doofaarro ah waa in aan la isticmaali ee gawraca Xalaal tan iyo hilibka doofaarka waxaa loo arkaa mid sharci darro ah in dhaqanka Islaamka. ***
Gawraca waa in la oggol yahay in meesha laga saaro xoolaha ayaa si sax ah oo aan la baabbi’in ka xariiqda.
Baqtigoodana waa in la si gooni gooni ah la warshadeeyey oo ku tilmaamay sidii aan – xalaal ah.
Baqtigoodana Xalaal gowracay waa in la tuntay oo ku tilmaamay sida ” Xalaal ” .